Raha hiseho i Kristy, dia ho tahaka Azy isika
"Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa" - 1 Jao. 3:2.
Tsy tokony hipetrapetra-potsiny isika ka hanantena fa ho tanteraka ho azy amintsika amin'ny fomba mahagaga ny fiovan-toetra rehefa hiseho eny amin'ny rahon'ny lanitra amin-kery sy voninahitra i Jesosy. Tsia, ry tanora namako, tompon'andraikitra eo anatrehan'ny fitsarana isika, ary omena fotoam-pahasoavana isika eto amin'ity fiainana ity mba hahafahantsika mamolavola ny toetsika ho vonona amin'ny fiainan-ko avy, dia ny fiainana mandrakizay. — YI, 24 Aogositra 1893.
Aoka tsy hisy olona hihevitra fa afa-miaraka amin'ny Fanahin'i Kristy ny fitiavan-tena sy ny fizahozahoana ary ny fanaranam-po ny tena. Andraikitra lehibe izay tsy ho voatombantsika araka ny tokony ho izy no eo an-tsoroky ny lehilahy sy vehivavy tsirairay izay niova fo. Ny toe-tsaina sy ny fomban'izao tontolo izao dia tsy tokony.hianaran'ireo zanakalahy sy zanakavavin' Ilay Mpanjakan'ny lanitra. —TFC 5:410
Hisetra zava-tsarotra isaky ny indray mandingana isika rehefa misaraka amin'izao tontolo izao. Indro anefa misy fampaherezana ho antsika: " Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa".
Aoka hasehontsika amin'ny fitenintsika sy ny asantsika fa mahatsapa ny andraikitra lehibe izay nankinina tamintsika isika. Aoka hamirapiratra tsara ny fahazavantsika mba hahitan'ny hafa fa manome voninahitra ny Ray eo amin'ny fiainantsika andavanandro isika, sy mba hahitany fa mifandray amin'ny lanitra isika ary mpiara-mandova amin'i Jesosy Kristy. —TFC, 4:16
Ny fifandraisana amin'ny Ray sy Jesosy Kristy Zanany dia midika ho fanomezan-kaja sy fanandratana ary fanaovana antsika ho mpiombona anjara amin'ny hafaliana tsy hay lazaina sy be voninahitra. Mety hanana ny tombambidiny tokoa ny sakafo, akanjo, trano sy harena; fa ny hasarobidin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy hita pesipesenina. (...) Ary na dia mbola tsy miseho aza "izay ho toetsika rahatrizay", dia "fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika". —TFC, 4:357.